Bandow lagu soo rogay xerada afisyooni oo La Qorshaynaayay in lagu Doorto Madaxweynaha Soomaaliya - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized WARARKA MAANTA Bandow lagu soo rogay xerada afisyooni oo La Qorshaynaayay in lagu Doorto...
Bandow lagu soo rogay xerada afisyooni oo La Qorshaynaayay in lagu Doorto Madaxweynaha Soomaaliya
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (Atmis) ayaa bandow kusoo rogay Teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow dhow, ka hor doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado inay dhacdo maalinta Axadda ah.
Bandowga ayaa socon doona Talaadada ilaa Isniinta todobaadka soo socda. In ka badan 300 oo xildhibaan ayaa ku kulmi doona garoonka diyaaradaha si ay ugu codeeyaan madaxweynaha xilka hayn doona afarta sano ee soo socota.
Musharixiinta ugu muhiimsan ee doorashada ku jira ayaa waxaa ka mid ah Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo labadii madaxweyne ee isaga ka horreeyay ee kala ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, kuwaasoo loo arko inay ugu cadcad yihiin.
Codeynta ayaa 15 bilood dib u dhac ku yimid waqtigii loogu talagalay, waxaana taasi sabab u ah isqabqabsiga ka dhex jira siyaasiyiinta ugu sareysa ee ku aadan qaabka ay u dhaceyso doorashada.
Previous articleBooliska oo Ka Warbixiyay Khasaaraha ka Dhashay Qarixii Ka dhacay Muqdisho
Next articleAl-Shabaab oo shaacisay in nin ajnabi uu ahaa qofkii isku qarxiyey xerada Ceelbaraf iyo dalka uu ka yimid